Efa manomboka ny fanadiovana izao ka miomana . Raofina avy izay olona tsy nanara-dalana - Clash info du 17 février 2019 - Survivre à Madagascar dans le milieu des infrastructures télécom et réseaux CISCO
Accueil Lutte contre la corruption à Madagascar Efa manomboka ny fanadiovana izao ka miomana . Raofina avy izay olona...
Efa manomboka ny fanadiovana izao ka miomana. Raofina avy izay olona tsy nanara-dalana. Efa tery anie ny fonja e, tsy quoi fa ampidirio, refa mpandoto tanana, manoatra noho ny zaoridira. Niantsoana saka mainty mihitsy anie hoy aho mba kozy. Voasambotra ilay antsoina hoe Eddy bois de rose e, teny amin’ny La City Ivandry teo amin’ny parking no nosakananan’ny mpitandro ny filaminana. Navoaka tanatin’ilay fiara nitondra azy, voasambotra tamin’izany koa ilay sachet mavomavo, nisy basy tanatiny no loharanom-baovao; voapanga ho mpiray tsikimbakoba iny sachet iny izao. Voa mandalo koa ve tsy ho vakiana fotsiny ilay tary, mamofona bois de rose amin’ny hectara, déjouer le chat noir, mila diovina gasikara, amin’ireo fakon’olona izay mandoto tanana. Mitohy ihany ny fanadiovana ary eto vao giravy fa hilentika jiaby niany Fanja mianakavy, efa nandalo bianco, nisy fotoana ity raharaha fa izao dia voasambotra i Mbola Rajaonah. Efa nilaza moa ramose Jean Louis Andriamifidy, fa mbola hitohy ny tantara fa tsy hoe akory tsy tadidy. Tena Antsahabe no voasambotra tamin’ny alarobia i Mbola Rajaonah fa ny indro kely dia ity, tsy nisy taratasy hono ny fisamboran’azy, fanararaotam-pahefana izany hoy ilay mpisolo vava, tsy nahita n’inon’inona ihany koa ny mpisava, tsy nisy ve na dia hoe sachet kely mavomavo. Miomakomana ary ilay miala manaraka an, fa ny mpisambotra dia navy toy ny mpangalatra a. mba tongava saina izay meloka rehetra ireny e, aza miandry samborina fa mitonona tena e. Vaovao ara-kolontsaina sy serasera mikasika irao rakintsary aseho amin’ny haino aman-jery, dia nanao fanambarana ny ministera fa misy clip sasany.
Article précédentMadagascar – arrestations spectaculairement louches des revanchards – La gazette de la grande île du 16 février 2019
Article suivantLa ministre de la Justice, HARIMISA Noro est celle qui a restauré la discipline et l’ordreau sein de son ministère – La gazette de la grande île du 17 janvier 2019